100m ukusuka kolunye ulwandle oluhle kakhulu kwisiqithi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
Kwenye yezona ndawo zintle kwi-Ile de Ré, indlu eyi-180 m2 kwisitayile sanamhlanje, igadi eyi-2000 m2 kunye neemitha ezili-100 ukusuka kolunye ulwandle oluhle kakhulu. Le ndlu yimizuzu emi-5 ngebhayisekile ukusuka elalini. Amagumbi okulala 2, 3 kunye no-4 anebhedi enye enokuthi ibe ziibhedi ezimbini. Igumbi ngalinye lokulala linegumbi lalo lokuhlambela okanye igumbi lokuhlambela.
Kukulungele ukuhlala iintsapho ezi-2 kunye nabantwana abayi-8 ukuya kwizibini ezi-4 kunye nabantwana abane.
Yindawo apho sithanda ukuza kutshaja iibhetri zethu kunye nabantwana bethu kunye nabahlobo bethu. Ihlala kunye nokulula kwezindlu zeentsapho, ngaphakathi okanye kwi-terrace enkulu.
Uya kuziva usekhaya apho, ungqongwe ziincwadi, iicomics, imidlalo yabantwana, kunye negadi enkulu. Ekubeni phantse ungenammelwane, ukulala kwakho emthunzini wemithi kuya kuphazanyiswa kuphela ziintaka.
Asiboneleli ngamashiti okanye iitawuli, kodwa uCorinne, oya kukuvulela ucango, uya kukuvuyela ukukunika iinkonzo zakhe zokurenta.
Ngenxa yezizathu zokwaliwa kakhulu kubantwana bethu, siyazisola ngokungakwazi ukwamkela abahlobo bethu bezilwanyana.
Sikhethe le ndawo kuba indlu yethu ikwimitha embalwa ukusuka kunxweme oluhle oludume ngokutshona kwelanga. Kancinci, ufikeleleka ngeenyawo okanye ngebhayisekile, uya kuba nokukhetha phakathi kweelwandle ezithe cwaka zosapho okanye amaza olwandle, adume ngokusefa. Kodwa kunye nehlathi lencam yeLizay kubathandi bokuhamba.
Umbindi welali, efikeleleka kwimizuzu emi-3 ngebhayisekile, kwizitrato ezincinci ezithuleyo zelali, ibonelela ngazo zonke iivenkile eziyimfuneko, kodwa kunye neendawo zokutyela ezimbalwa kunye neendawo zokuphumla ukusuka kwimini entle phantsi kwelanga leRetais.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Les Portes-en-Ré